सुशान्तकि प्रेमिका भनिएकी रियाले प्रहरीलाई दिइन् यस्तो ब'यान
सुशान्तकि प्रेमिका भनिएकी रियाले प्रहरीलाई दिइन् यस्तो ब’यान
आषाढ ४, २०७७ २३:२५:३९ • २३१ पटक पढिएको
एजेन्सी: बलिउड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतले आ’त्मह’त्या गरेसंगै मुम्बई पुलिसले अ’नुसन्धान गरिरहेको छ।
अचानक आत्मह’त्या गरेको खबर बाहिरीएसंगै देश विदेशमा रहेका उनका शुभचिन्तक नि’राश छन् भने सिंगो बलिउड नै शो’कमा डु’बेको छ । उनको आ’कस्मिक मृ’त्यु पछि मुम्बई पुलिसले एउटा मु’द्दा द’र्ता गराएर अ’नुसन्धान गरिरहेको छ ।
उनको मृ’त्युले यतिबेला धेरै प्रश्नहरु उठाएको छ । जस मध्ये सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो सुशान्तले किन यस्तो कदम उठाए ? राम्रो सफलता, सुख सयलको जीवनशैली, करोडौको माया पाएर पनि किन ए’क्लिने नि’र्णयमा पुगे सुशान्त ? यो प्रश्नको जवाफकै लागि यतिबेला अ’नुसन्धान भइरहेको छ । यतिबेला मुम्बई पुलिस उनको परिवारका सदस्य र उनिसंग नजिक रहेका साथीहरुलाई सो’धपुछ गर्नमा लागी रहेको छ।
बिहीबार, बलिउड अभिनेत्री र सुशांतको साथी रिया चक्रवर्तीलाई पुलिसले चौ’कीमा बोलाएको छ । रिया बिहीबार बांद्रा पुलिस चौ’की पुगेकी थिइन, उनलाई करिव ९ घण्टा सो’धपुछ गरिएको बताइएको छ । साथै रिया चक्रवर्तीको ब’यान रे’कर्ड गरिएको छ ।
सुशांतले किन यति ठूलो कदम चाले भन्दै भित्रि कारण प त्ता लगाउन पुलिस खो जी कार्य जारी राखेको छ । मुम्बई पुलिसले सुशांतको पीआर गतिविधिहरू सम्हाल्ने पूर्व व्यवस्थापक श्रुति मोदीको ब’यान पनि रेक’र्ड गरेको छ।